कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने– रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा उठ्छन् र ? Canada Nepal
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेताहरु सार्वजनिक बहसमा उत्रिन थालेका छन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार काठमाडौंमा आउँदो फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुनेछ । बीचमा कुनै फेरबदल नभएमा फागुनमा महाधिवेशन हुने भएपछि महाधिवेशन लक्षित नेताहरुले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
१३औं महाधिवेशनमा तीन गुट सक्रिय रहेका कांग्रेसमा १४औं महाधिवेशनमा क–कसको प्यानल समूहले प्रतिस्पर्धा गर्ने एकीन भइसकेको छैन । १३औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
तर, १४औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा उठ्नेमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सगरमाथा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेता सिटौलाले भने, ‘रामचन्द्र सभापतिमा उठ्नुहुन्छ र ? उहाँले सभापति उठ्छु भन्नु भएको छैन ।’
आगामी १४औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, काम गर्ने शैली र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दाबी गरेका उनले घुमाउरो पारामा आफू पनि सभापतिमा उठ्ने संकेत गरे । नेता पौडेल सभापतिमा नउठे कोइराला परिवारबाट उठ्ने संकेत सिटौलाले अभिव्यक्तिले देखाउँछ । कोइराला परिवारबाट सभापतिमा उठेमा नेता सिटौलाले छाड्ने कांग्रेसभित्र चर्चा चल्दै आएको छ ।
कोइराला परिवारबाट उठ्ने सभापतिका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा नेता सिटौला रहेका भनिएका बेला यसपटक पौडेलको उम्मेदवारी नआउने बताएका हुन् । सभापति देउवाले काम गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका नेता सिटौलाले अब महाधिवेशनले सक्षम र जिम्मेवार नेता चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १८:४२:०७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भइरहेको छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भइरहेको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि बिहीबार करिब ३ घण्टामा छलफलमा जुटेका उनीहरु शुक्रबार पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।
गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी दिएपछि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड छलफलमा जुट्दै आएका छन् ।
उनीहरुबीच सबै मन्त्री फेर्ने, दुई वर्ष पूरा भएकालाई हटाउने र राम्रा काम गरेकालाई निरन्तरता दिने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । तर, हालसम्म ठोस निर्णय गर्न भने सकेका छैनन् ।
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ११:२७:०५ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीतको विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनलाई मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै विवादमा तानिएकी छन् ।
गौतमलाई सांसद मनोनीतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको हो । तर, त्यो विषय संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले संविधानविद्, कानुनविद्सँग राय र परामर्श लिनुपर्ने थियो । राष्ट्रपतिकै कानुनी सल्लाहकार पनि हुन्छन् ।
सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबारे कानुनी परामर्श लिने तयारी गरेको थियो । तर, पछि त्यत्तिकै उनलाई सांसद मनोनीत गरियो । पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइयो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत यो निर्णय गम्भीर संवैधानिक विवाद भएको आदेश सुनाइसकेको छ । यो विषय अब असोज १४ गते टुंगो लाग्ने छ । विगतमा संविधानसभामा पनि यस्तै विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यो मुद्दाको किनारा अहिलेसम्म लागेको छैन ।
अदालतले सांसद बन्न पनि अयोग्य घोषणा गर्ने हो कि भन्ने डर वामदेव गौतम मात्रै होइन, नेकपाकै पार्टी पंक्तिलाई पनि देखिएको छ । यदि अदालतले उनलाई सांसद बन्न अयोग्य घोषणा गरेमा राष्ट्रपति पदको भूमिकामाथि नै नैतिक प्रश्न खडा हुने निश्चित छ । त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीलाई धेरै ठूलो दबाब पर्ने सम्भावना छ ।
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ०९:४२:१४ बजे : प्रकाशित
बैठकमा ओलीसँग कड्किँदै वामदेवले भने– पहिले चुनाव हराउने अहिले अपमान गर्ने ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको असन्तुष्टि अझै सेलाइसकेको छैन । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लगिए पनि उनको चाहनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेको आरोप लगाइएको छ । गत आइतबार कोटेश्वरको पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष गौतमबीच भनाभनको अवस्था सृजना भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गौतमले विश्वास नगरेको तथा गौतमले ओली आफूविरुद्ध लागेको बताएपछि दुई नेताबीच भनाभनको अवस्था सृजना भएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
सो बैठकमा पार्टीलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने गरी ओली प्रस्तुत भए पनि उनीहरुबीच विगतदेखिका गतिविधिलाई लिएर भनाभनको अवस्था सृजना भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरिएका गौतम मन्त्री बन्न चाहन्छन् । उनलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गौतम पक्षधरले दवाव पनि दिएका छन् । बुधबार सर्वाेच्च अदालतले उनलाई राष्ट्रिय सभाको हैसियतमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तिम आदेश जारी गरेको छ ।
तर, यसअघि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूमाथि गौतमले विश्वास नगरेको टिप्पणी गर्दै थप छलफल गर्नुपर्ने बताए । ओलीले भने, ‘वामदेव कमरेडसँग मप्रति विश्वास नै छैन। त्यो कुरा प्रस्ट छ। त्यसैले उहाँसँग छलफल गर्नुपर्छ।’
ओलीको सो अभिव्यक्तिपछि गौतम कड्किए । आफूलाई चुनाव हराउनेदेखि राष्ट्रिय सभामा लैजाने बेला छिर्के थापेकोसम्म ओलीमाथि गौतमले आरोप लगाए । गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बेला बर्दिया १ बाट आफूलाई हराउन लागिपरेका ओलीले पार्टीभित्रबाटै अन्तर्घात गर्दासम्म छानबिन नगरेको गौतमको आरोप छ । तर, अहिले आफूविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्रको सामना गर्नुपर्नेमा उल्टै अपमान गरेको आरोप गौतमले दोहो¥याए ।
बैठकमा ओलीसँग जंगिएका गौतमले भने, ‘पहिला पनि चुनाव हराउनुभयो। हारेपछि छानविन गर्नुभएन। राष्ट्रियसभामा लैजानुअघि चुनावको अत्तो थापेर छिर्के लगाउन खोज्नुभयो। लैजाने निर्णय भएपछि पनि लग्नुभएन। अहिले राष्ट्रियसभामा लगेपछि पनि आलोचना गरिरहनुभएको छ, जबकि डिफेन्ड गर्नुपर्ने हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफू निकै अपमानित हुँदै आएको गौतमले बैठकमा गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री ओली र गौतमबीच केहीबेरको भनाभन चलिरहँदा अरु नेता प्रतिक्रियाबिहीन थिए । अन्तिममा कुरा टुंग्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गौतमले भने, ‘मलाई मन्त्रीमा लगे पनि लग्नुस्, नलगे पनि नलग्नुस् ।
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार ०८:२१:५२ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीज्यू्, हेक्का रहोस् नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक नियुक्ति कानुनसम्मत् गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रवन्ध र पद्धतिअनुसार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराँंदै सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गर्दछ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सत्तारुढ दलभित्र भइरहेका छलफलसहितप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का रहोस् नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन ।’
संवैधानिक निकायमा गरिने पदपूर्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्‌मा छलफल गर्न आग्रह गर्दै प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्ति :
प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का रहोस् नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गर्दै आएको सर्वविदितै छ । लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्व, मर्म एवं मुल्य हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने सरकारले नबुझ्नु दुःखद त छ नै लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद संकेत होइन ।
संवैधानिक निकायहरूको गठनमा लामो समय ढिलाइ गरियो । अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदकै औचित्य समाप्त पार्ने असफल षड्यन्त्र पनि यस बीचमा गरियो । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने बिषयमा जुन रूपमा आफुलाई संलग्न गरायो त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ ।
संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले ब्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउंदै सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गर्दछ । जय नेपाल !
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १८:३१:१२ बजे : प्रकाशित
नारायणकाजी श्रेष्ठको सकारात्मक सुरुवात
काठमाडौं । नेपालको परराष्ट्र नीति राम्रो नभएको चर्चा चल्दै आएको छ । नेपालमा राम्रो परराष्ट्र नीति नहुँदा, भएको नीतिलाई मन्त्रीदेखि नेताहरुले अवलम्बन नगर्दा मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले सजिलै मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेट्ने गरेको देखिन्छ । यसरी कूटनीतिक नियोगमा प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रोटोकल भए पनि यसको पालना भएको देखिँदैन ।
यसको नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पालना गराउने प्रयास भएको थियो । तर, संक्रमणकालमा सरकार बन्ने र ढल्ने बाक्लो श्रृंखलाले यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।
अहिले नेकपाले दुई तिहाइ नजिक बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन् । उनले यसलाई कडाइका साथ पालना गराउने प्रयास गरेको देखिँदैन ।
तर, नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र प्रतिनिधि राख्ने गरेका छन् ।
बिहीबार उनले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग भेट गरे । आफ्नै निवास हरिसिद्धीमा आइपुगेका राजदूत क्वात्रासँग भेट गर्दा श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयका साउथ एसिया डेस्कका टिकाराम उपाध्यायलाई राखेका हुन् ।
उनले भेट गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्रका प्रतिनिधि राख्दै आएका छन् । उनले जस्तै अन्य नेताहरुले यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्ने गरेका छैनन् ।
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १७:५८:४९ बजे : प्रकाशित
# कूटनीतिक प्राेटाेकल